ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ရွှေယောက်ဖ ကောင်းမှုအကြောင်းပြု
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ဟိုနားလည်းကြားရ ရွေးကောက်ပွဲ ဒီနားလည်းကြားရ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် တစ်ပြားမှမရပဲ ကလော်တုတ်ခံရပြီး လုပ်အားပေးခဲ့ရတာလေးကို အမှတ်သွားရမိတယ် ။ အိမ်က ရွှေယောက်ဖ သံယောက်ဖ က နေရာတကာပါတဲ့ ကိုပါလေရာ သူ့ကောင်းမှုကြောင့် ကျနော့်မှာ တစ်ပါတ်လောက် ဒွတ်ခတော်တော် ရောက်သွားတယ် ။ရပ်ကွက် ဘောလုံးပွဲဆိုရင် သူက နည်းပြ အိမ်က လိမ်းဆေးဖိုးစိုက်ရ သံပုရာရည်ဖျော်ပေးရနဲ့ တော်တော်ကိုအလုပ်ရှုပ်တာ ကျနော့်အစ်မ ကလည်း ပြတ်သလားတော့မမေးနဲ့ မသေမျှင်နဲ့ နင်လား ငါလားပဲ “ နင် ရပ်ကွက်ထဲမှာ ရာအိမ်မှူး ဆယ်အိမ်မှူး လုပ်တဲ့နေ့ နင်နဲ့ငါ ကွဲတဲ့နေ့ပဲ” တဲ့ ။ အဲ့လောက်ပြောထားတာတောင် ရပ်ကွက်ရုံးက ခေါ်ပြီး တာဝန်ပေးလိုက်တော့ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကျနော့်ကိုလာပြောတယ် “ မင်း အစ်မသိရင် ပွစိပွစိ လုပ်နေအုံးမယ် လုပ်စမ်းပါဟ မုန့်ဖိုးပေးမယ် ” လက်ပေးလက်ယူ ဒို့ကြည်ဖြူပဲ တကယ်တော့ သက်သာမယ်ထင်လို့ လက်ခံလိုက်တာပါ။
နွေရာသီကြီး ပူတဲ့အချိန် ရပ်ကွက်ထဲ လိုက်မလှည့်နိုင်ပါဘူး ညနေပိုင်း အလုပ်နည်းနည်းပါးတဲ့ အချိန် စာရွက်တွေ ယူ တစ်အိမ်ဝင် တစ်အိမ်ထွက်နဲ့ ကိုယ့်မှာ နေပူကြီးထဲ ပြသနာတက်လို့ ခွေးက လိူုက်လို့ပြေးရတာနဲ့ ။ အိမ်ထောင်စုစာရင်း ပျောက်နေလို့ ၁၅ မိနစ်လောက် စောင့်ရတဲ့ အိမ်မျိုး ရှိသလို ၊ ထမင်းစားနေလို့ ခဏစောင့်ဆိုတာမျိုးလည်း ကြုံရတာပဲ ။ တစ်ချို့အိမ်ကျတော့ “ အစ်မ ရှာလိုက်အုံးမယ် မောင်လေး ခလေး ခဏလောက်ချီထားပေးပါလား ” ဆိုလို့ ချီထားပေးမိပါရဲ့ ရှူရှူးတွေပေါက်ချလိုက်လို့ နောက်ထပ်အိမ်တွေ စာရင်းလိုက်မကောက်ရတော့ပဲ စိတ်တိုတိုနဲ့ ပြန်လာခဲ့ရတဲ့ နေ့မျိုးလည်းရှိတယ် ။ “ နင်လာမယ်ဆို ငါ့ကိုလာကြိုပြော အိမ်ထောင်စုစာရင်းက ပျောက်လို့ရတာမဟုတ်တော့ သေချာသိမ်းထားရတာ ရှာဖို့မလွယ်ဘူး” မထင်ရဘူး ရပ်ကွက်ထဲက လူကြီးလူကောင်းအိမ်လို့ထင်ရတဲ့ မိန်းမကြီးက အပေါက်ဆိုးဆိုးနဲ့ ကိုယ့်ကိုများ ဟောက်ထည့်လိုက်တာ ဘယ်ရမလဲ “ ကျနော်က လခစားလည်းမဟုတ်ဘူး သက်သက်လုပ်အားပေးနေတာ အဲ့လောက်တောင်မအားရင်လည်း အဒေါ့်ပါသာ ရပ်ကွက်ရုံးမှာပဲ စာရင်းသွားပေးတော့ ကျနော်ကတော့ ကောက်လို့မရတဲ့ အိမ်စာရင်းထဲထည့်လိုက်ပြီး ” အဒေါ်ကြီးက မျက်လုံးကြီး ပြူးပြီးကြည့်နေတယ် ပြန်မပြောတတ်ဘူးထင်လို့ဖြစ်မယ် အားတော့နာပါရဲ့ သည်းမခံတတ်တာ ခက်တယ် ။
“ ဒီစာရင်းတွေလိုက်ကောက်နေတာ ဘာလဲ ဆန်ဝေမလို့လား ဆီဝေမလို့လား သောက်ရာရောက်တာလည်းမဟုတ် ပြီးရင် သူတို့ပါသာ တက်ချင်တဲ့သူတက်နေတာကိုများ ” တဲ့ အော် . ( သားနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ ဦးရယ် ) ။ “ ဟဲ့...နင်တို့ အဲ့တာလုပ်ပေးတာ တစ်နေ့ ဘယ်လောက်ရလဲ ” ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူုး တစ်ပြားမှမရပဲ ဒီလောက်နေပူကြီးထဲ လိုက်လုပ်နေရတာ စဉ်းစားကြည့်ရင် ယောက်ဖကို စိတ်တိုတယ် ။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်လေ ဒါတွေက အပိုအလုပ်တွေပဲ ကိုယ့်ပါသာ ဘာမဲပဲထည့် သူတို့လည်း တက်ချင်တဲ့သူတက်မှာပဲ တော်ပြီး ပြောတော့ဘူး သားသားကြောက်ကြောက် ။ ၁ ပါတ်ကျော်ကျော်လောက် အပင်ပန်းခံပြီး ရပ်ကွက်ထဲ စာရင်းလိုက်ကောက်ပြီး ရုံးသွားပြန်အပ်တဲ့နေ့က နေ့စားရဖို့နေနေသာသာ မျက်နှာထားမာမာကြီးတွေနဲ့ ကျေးဇူးလို့တောင်မပြောဘူး ။ နောက်ထပ်တစ်ပါတ်လောက်နေတော့ အလုပ်တစ်ခုအတွက် ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာလေး လိုလို့သွားလုပ်တာ ပိုက်ဆံမရတော့ မင်းက ဘယ်ကလဲတဲ့ ။ ” ဦးကလည်း ဟိုတစ်ခါခိုင်းတုန်းက ကျမှတ်မိပြီး ခုကျမမှတ်မိတော့ဘူးလား ရပ်ကွက်ထဲမှာ အိမ်ထောင်စုစာရင်းလိုက်ကောက်ပေးထားတာ ကျနော်လေ ” ဆိုတော့ အော် အေအေ တဲ့ ။ ဟူး လွယ်ဘူး ကျနော် ကတော့ နည်းနည်းလေးဆို ပြန်ခံပက်ဖို့ပဲသိတော့တယ်။
ရွေးကောက်ပွဲတဲ့ တစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး အဲ့တာက တကယ်ကြီးလား ဇတ်လုပ်ကြီးဖြစ်နေမယ်ထင်တာပဲ ဟဲဟဲ ။
သြော်.. ကိုယ့်အစ်မပေးထားရတာ ဂလောက်တော့ရှိမာပေါ့ကွယ်..
အော် . ( သားနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ ဦးရယ် )
နာလဲ မိန်းမရလို့ကတော့ အကို့ကို
အော် တူတို့ရပ်ကွက်က တစ်ညိုးကြီးနော်
မင်းဘယ်ကလဲ မမေးအောင် အစိမ်းရောင် ဆောင်ထားရမလိုပဲ
လင့် အသစ် ပြင်ချိတ်လိုက်ပြီ
ပို့စ်တပုဒ်တက်တာ အမြတ် :P
စုံလည်း စုံတဲ့ မောင်မျိုး..။